ကွန်ဒုံး - ဝီကီပီးဒီးယား
အမျိုးသမီးသုံး အတွက် အမျိုးသမီးသုံး ကွန်ဒုံး ကို ကြည့်ပါ။
ကိုယ်ဝန်တည်ခြင်းနှုန်းများ (first year, latex)
ကွန်ဒုံး (condom) သည် လိင်ဆက်ဆံရာတွင် အသုံးများသော ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ကွန်ဒုံကို တင်းမာနေသော ယောက်ျား လိင်တံ တွင် စွပ်ထားပြီး ပန်းထွက်လာမည့် သုတ်ကောင်များအား တဖက် လိင်ဆက်ဆံသူ၏ ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ မဝင်ရောက်စေရန် တိုက်ရိုက် တွေ့ထိမှုကို ပိတ်၍ ကာကွယ်ပေးထားသည်။ ကွန်ဒုံးကို သန္ဓေတားရန်နှင့် လိင်မှ ကူးစက်တပ်သော ရောဂါများကို ကာကွယ်ရန် သုံးသည်။ ကွန်ဒုံးသည် ရေလုံပြီး ပျော့ပြောင်း၍ ခိုင်မာသောကြောင့် အခြားသောသုံးစွဲမှုများလည်းရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာ ရေလုံ မိုက်ခွက်တို့မှ ရိုင်ဖယ်သေနက်ပြောင်းများ ကာကွယ်ရန် အထိသုံးသည်။
အမျိုးသားကွန်ဒုံးသည် ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါအပါအဝင် လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများကို ကာကွယ်သည်။ ထို့အပြင် ကိုယ်ဝန်မရစေရန်နှင့် လိင်မှတဆင့်ကူးစက်တတ်သောရောဂါများ ၂ခုစလုံးကို ကာကွယ်နိုင်သော တစ်ခုတည်းသော ပစ္စည်းဖြစ်သည်။
အထိရောက်ဆုံးကာကွယ်မှုကို ရရှိနိုင်ရန် လိင်ဆက်ဆံမှုတိုင်းတွင်မှန်ကန်စွာသုံးစွဲရန် လိုအပ်သည်။
လိင်ဆက်ဆံဖော်နှစ်ဦးလုံး၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို လိုအပ်သည်။ ဆက်ဆံမှုမပြုမှီ ကွန်ဒုံးအကြာင်း ပြောကြခြင်းဖြင့် မိမိ၏အဖော် အားအသုံးပြုလာစေရန် ဆွဲဆောင်နိုင်သည်။
ကွန်ဒုံးသည်အတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်ပြီး အမျိုးသား၏ သုတ်ပိုးများ အမျိုးသမီး၏ မိန်းမကိုယ်အတွင်း မဝင်ရောက်နိုင်စေရန် ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်သည်။
နည်းလမ်းမှန်မှန်အမြဲသုံးစွဲပါက ထိရောက်မှုရှိသည်။ တစ်နှစ်တိတိ နည်းလမ်းမှန်စွာသုံးစွဲသော ဇနီးမောင်နှံ၁၀၀ လျှင် နှစ်ဦးခန့်သာ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်သည်။ နည်းလမ်းမမှန်မကန်သုံးစွဲသောအိမ်ထောင်စုများအနက် ၁၀၀ လျှင် ၁၅ ဦးအထိ ကိုယ်ဝန်ရှိကြောင်းသိရသည်.။ ကိုကွန်ဒုံးအသုံးပြုရန် သင့်တော်သူများ
ကာလသားရောဂါများ (သို့) HIV ပိုး ကူးစက်ခံရရန် အန္တရာယ်ရှိသူများ (သို့) စုံတွဲများ
အခြားရောဂါများကြောင့် ပိုမိုထိရောက်သော နည်းလမ်းများကို အသုံးမပြုနိုင်သော အမျိုးသမီးများ
သားဆက်ခြားရန် လိုအပ်သော နို့တိုက်မိခင်များ
အခြားအရံနည်းလမ်းကို တွဲသုံးရန်လိုအပ်သော အမျိုးသမီးများ
↑ ၁.၀ ၁.၁ Trussell၊ James (2011)။ "Contraceptive efficacy" (PDF)။ in Hatcher၊ Robert A.; Trussell၊ James; Nelson၊ Anita L.; Cates၊ Willard Jr.; Kowal၊ Deborah; Policar၊ Michael S. (eds.)။ Contraceptive technology (20th revised ed.)။ New York: Ardent Media။ pp. 779–863။ ISBN 978-1-59708-004-0။ ISSN 0091-9721။ OCLC 781956734။ 2013-11-12 တွင် မူရင်းမှ မော်ကွန်းတင်ပြီး (PDF) ။
↑ ၂.၀ ၂.၁ Hatcher၊ Robert Anthony; M.D၊ Anita L. Nelson (2007)။ Contraceptive Technology (အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်)။ Ardent Media။ pp. 297–311။ ISBN 9781597080019။ 2017-09-18 တွင် မူရင်းမှ မော်ကွန်းတင်ပြီး ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကွန်ဒုံး&oldid=693663" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၅:၅၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။